Tonga ny karatra bilaogiko! | Martech Zone
Talata, Septambra 18, 2007 Zoma Janoary 6, 2017 Douglas Karr
Raha vantany vao vita ny lahateniko amin'ny kaonferansa dia matetika aho no mangataka karatra fandraharahana ataon'ny sasany amin'ireo olona. Karatra fandraharahana? Ho an'ny bilaogera? Miaraka amin'ny kaonferansa 3 ho avy ao anatin'ny volana vitsivitsy, dia nanapa-kevitra ny handray ny anjarako aho ary hanao karatra orinasa! Tsy azoko antoka hoe ohatrinona ny orinasako mety very taorian'ny nialan'ny olona iray ary tsy tadidiko hoe iza aho.
Tonga androany ireo karatra ary heveriko fa tsara be ry zareo:
Ny karatra dia nataon'i VistaPrint, io no faha-5 na faha-6 niarahako niasa tamin'izy ireo. Manolotra karatra fandraharahana maimaim-poana izy ireo miaraka amina endrika mahazatra - na afaka mivoaka daholo ianao. Nisafidy ny hamolavola ny ahy manokana mihoatra ny sary afara izay ananany ao amin'ny tahiry. Nahazo glossy aloha aho ary misy lamosina mainty sy fotsy. Soso-kevitra iray amin'ny famolavolana… amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratr'izy ireo, azonao atao ny manisy sosona iray hafa. Ao amin'ny lohatenin'ny bilaogiko ary URL, Mampiasa endritsoratra fotsy ambonin'ilay loko mainty aho mba hivoahany miaraka amin'ny manga manga.
Miaraka amin'ny fandefasana azy dia nahalasa $ 50 ho an'ny karatra 500 aho. Ataoko fa tsy dia ratsy loatra izany! Izy ireo dia handoa ho an'ny tenany miaraka amin'ilay olona voalohany mahatsiaro ahy. 🙂
Indray mandeha aho dia nanana karatra vitsivitsy natao ho an'ny Raiko ary nanapaka teny iray tamin'izy ireo izy ireo. Vantany vao nifandray aho VistaPrint, nanana andiany vaovao namboarina izy ireo ary natory tamin'ny dadanay. Tena gaga tamin'ny serivisin'izy ireo aho.
Aza hadino ny hisambotra ahy amin'ny Konferansa momba ny varotra B2B momba ny varotra ho avy any Chicago! Ho eo amin'ny tontonana bilaogy aho. Mijanona kely ary azoko antoka fa homeko anao ny karatro.
Tags: karatra fitorahana bilaogykaratra fandraharahanakaratradouglas karrBlog Tech Marketingbilaogy teknolojia marketingvistaprint
18 Septambra 2007 à 11:45
Salama Doug. Hitako fa navaozinao koa ny sora-baventy sy ny logo. Toa mahafinaritra. Ahoana no nataonao?
Tsara ny mandre fa sahirana manao ny fihaonambe ianao. Tsy niteny ampahibemaso aho tao anatin'ny 10 taona ary somary mitebiteby momba ny Blog World aho. Misy soso-kevitra?
Sep 19, 2007 amin'ny 6: 44 AM
Misaotra re: ny sora-baventy. Nampiasa Adobe Illustrator sy Photoshop aho. Photoshop amin'ny sary, Illustrator amin'ny lahatsoratra. Efa an-taonany vitsivitsy izao no nisavoritaka tamin'ireo rindranasa roa ireo aho, misy curve fianarana be dia be (tena tsy mahay Photoshop mihitsy aho!). Raha manapa-kevitra ny handeha amin'io lalana io ianao dia tandremo tsara bitbox - Misy toro-hevitra lehibe, fanomezana maimaim-poana ary fampianarana any.
Ny zavatra momba ny fihaonambe dia zavatra izay mampitebiteby ahy sy mampientanentana ahy. Heveriko fa mora kokoa ho an'ny bilaogera satria 'manao fanazaran-tena' miteny isan'andro ao amin'ny tranokala izahay. Ny fanalahidin'ny lahateny ampahibemaso rehetra dia ny fahafantarana ny fitaovanao – ary ahoana no ahafantarana ny bilaogy tsara kokoa noho ny bilaogera?!
Tonga amin'ny fotoana ny fitenenana mora. Eritrereto ny valiny tsirairay alohan'ny hanombohanao miresaka - manampy kely izany. Indraindray dia mamerina ny fanontaniana ho an'ny rehetra aho ary manome ahy fotoana hanangonana hevitra izany. Hitako fa mitabataba sy mikorontana kokoa aho raha manandrana mitifitra avy hatrany avy eo amin'ny vala.
Mirary anao ho tsara vintana! Zavatra mahafinaritra ity!
Sep 19, 2007 amin'ny 2: 14 AM
Tena mahafinaritra ny karatra! Mirary soa amin'ny fihaonambenao.
Jolay 31, 2008 amin'ny 2:25 PM
Oh tsia! Ao indray ny palitao sy karavato! '-p
(Tena tsara anefa ny famolavolana! 🙂